GNOME 40.4 inouya nekuvandudzwa kwePlppak uye GNOME Shell | Linux Vakapindwa muropa
Inenge mwedzi mushure meiyo yapfuura kugadzirisa, chirongwa chiri seri kwedhesiki rinonyanya kushandiswa muLinux chatanga GNOME 40.4. Ichi chiitiko chechina chekugadzirisa mune dzino nhevedzano, imwe yakaita kusvetuka kukuru kuenda kumberi, kusvika padanho apo Canonical neGNOME edition yeManjaro yakamirira mwedzi kuti iwedzere. Ubuntu haasati aita zvakadaro, asi achazviita muna Gumiguru 14, zvinowirirana nekutanga kwemhuri yeImpish Indri.
Zvizhinji zve nhau, inowanikwa mu Iyi link, vanosvika sekuvandudzwa kwezvishandiso, nekuti GNOME haina kupatsanura sezvinoita KDE nePlasma yayo (graphical nharaunda) uye maGear (maapplication). Zvinotaridza pachena kuti GNOME Shell yakagadziridzwa kuita vhezheni 40.4 uye uko notupukanana senge kutarisisa windows iyo isina kutaridzika 100% yakanaka yakagadziridzwa.
Pfungwa dzeGNOME 40.4
Ziso reGNOME rakagadzirisa tsaona yakaitika apo izvo zvemukati kana saizi yefaira zvaisaonekwa.
Tsigiro yegnome-autoar 0.4.0.
Pakutanga setup ikozvino inoshanda nemazvo kana geolocation yakaremara.
Iyo yekushandisa mamiriro ekunze yakagadziridza iwo maratidziro mune yakasviba madingindira uye inoratidza iwo ruzivo mune madigiri Celsius neFahrenheit panguva imwe chete.
Yakavandudza kutsvaga kweFlatpak kunyorera uye rutsigiro rwemhando iyi yemapakeji zvakajairika.
GDM inoshanda zvakanyanya pakuvhura GNOME Keyring ine disk password.
GNOME 40.4 ikozvino iripo, uye unogona kurodha pasi kodhi yako kubva Iyi link. Zvimwe zvikumbiro zvichaonekwa paFlathub, senge iyo imwe yenguva iyo inogona kutotorwa kare. Kune avo vanosarudza kushandisa mapakeji kubva kumahofisi epamutemo, kusvika kwavo kunoenderana nekuparadzirwa. Ivo vanoshandisa iyo Rolling Release modhi yekuvandudza vachasvika munguva pfupi, asi vashandisi vemasystem senge Ubuntu kana Fedora vanofanirwa kumirira chimwe chinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » GNOME 40.4 inosvika pamwe nekuvandudzwa muFlatpak, GNOME Shell uye akati wandei mashandiro edesktop inozivikanwa
Ndine urombo kana uchida kana kwete. Imwe yeanonyanya kushandiswa, aiwa, anonyanya kushandiswa, kuti pano unoita chorus surveys uye kde inobuda, hazvireve kuti lx inotonga pasi rese. Ubuntu, fedora uye debian, ndiwo matatu anonyanya kushandiswa marisasi munyika, saka…, ndizvo zvazviri.
Pindura kune zvisiri izvo
Uye yakanyanya kushandiswa haisi imwe yeanonyanya kushandiswa?